Tobanka magaalo ee ugu muhiimsan Faransiiska: Tirada dadka iyo hidaha | Wararka Safarka
Luis Martinez | 19/07/2021 09:26 | Magaalooyinka, Francia
Ka hadalka tobanka magaalo ee ugu muhiimsan Faransiiska waxay ka dhigan tahay ka hadalka kuwa leh tirada ugu badan ee degan. Laakiin sidoo kale kuwa leh qiimo taariikhi ah iyo taallo iyo xitaa kuwa hela tiro aad u tiro badan oo soo booqdayaal ah.
Sababtoo ah muhiimadda magaalo kaliya laguma oga baaxadda ama awoodda dhaqaale. Waxaa jira magaalooyin in kasta oo ay yar yihiin, haddana muhiimad weyn u leh taariikhda dhulkii hore ee Gallic-ga oo leh cajaa'ibyo qaabdhismeedyo leh, oo sannad kasta soo jiita kumanaan dalxiisayaal ah. Laakiin, annaga oo aan sii dheerayn, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa tobanka magaalo ee ugu muhiimsan Faransiiska.
1 Tobanka magaalo ee ugu muhiimsan faransiiska taariikh ahaan iyo dad ahaanba
1.1 Paris, mid ka mid ah dahabka Yurub
1.2 Marseille, xoog dhaqaale
1.3 Lyon, saddexaad ee tobanka magaalo ee ugu muhiimsan Faransiiska
1.4 Toulouse, caasimada Occitania
1.5 Wanaagsan, dhalaalka Côte d'Azur
1.6 Nantes, magaaladii Jules Verne
1.7 Strasbourg, caasimada yurub
1.8 Montpellier, oo ah magaalo ay lahayd Taajka Aragon
1.9 Bordeaux, oo ah dalkii khamriga
1.10 Lille, «Magaalada Fanka iyo Taariikhda»
Tobanka magaalo ee ugu muhiimsan faransiiska taariikh ahaan iyo dad ahaanba
Safarkeenna tobanka magaalo ee ugu xiisaha badan Faransiiska ayaa bilaabmi doona, sidee bay noqon kartaa haddii kale, iyadoo lala barbardhigi karo Paris, jacaylka «Magaalada Jacaylka». Mar dambe, way sii socon doontaa iyada oo loo marayo deegaannada kale ee durugsan sida dadka badan Marseille o Fiican, caasimada Côte d'Azur.
Paris, mid ka mid ah dahabka Yurub
Waxaan u baahanahay, midna, laakiin dhowr maqaal oo aan kaaga warrami doono wax walba oo aad ka heli karto Paris, sidaa darteed halkaan ayaan kaaga tagayaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan magaalada. Laakiin, sidaad ogtahay, astaanteeda weyn ayaa ah Eiffel Tower, oo loo dhisay Bandhiggii Universal ee 1889 kuna yaal jardiinooyinka quruxda badan ee Beerta Mars.
Dib ugama dhacdo gadaal muhiimada Notre Dame Cathedral ama Nuestra Señora, oo ah cajaa’ib qaab-dhismeedka Gothic-ka ah oo la dhisay qarnigii XNUMXaad. Iyo, oo ku xigta labada taallo, cajiibka ah Matxafka Louvre ama dhismaha la saarayo ee Aan sax ahayn, halka uu ku aasan yahay Napoleon Bonaparte.
Waa in lagu arko Paris sidoo kale waa xaafadda bohemian ee Montmartre, Kaniisada Qalbiga Xurmaysan, Royal Basilica-ka Saint-Denis iyo Champs-Elysées. Waxaas oo dhan adigoon ilaawin inaad ku socotid hareeraha Seine oo aad ku raaxeysatid cunnada Faransiiska makhaayadaha iyo makhaayadaha quruxda badan.
Marseille, xoog dhaqaale
Abbey ee Saint Victor
Waxay ku taal xeebta badda Mediterranean-ka oo durba loo beddelay deked ganacsi oo ay leeyihiin Phoenicians-ka, maahan oo keliya magaalada labaad ee ugu dadka badan Faransiiska, laakiin sidoo kale waa magaceeda oo u bixiyay heestii kacaanka ee cinwaankeedu ahaa. Marsellesa, heesta calanka ee dalka ee xilligan.
Magaalada caasimada u ah waaxda Bouches of Rhône ah waad booqan kartaa quruxda badan kaniisada Santa María la Mayor, oo u gaar ah dhammaan Faransiiska oo dhan qaabkiisa Romanesque-Byzantine. Iyo, agteeda, ha u joojin aragtida Saint Victor Abbey, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad oo laga yaabo inuu yahay meesha ugu cibaadada Masiixiyiinta ee dalka Gallic.
Laakiin astaamaha ugu badan ee Marseille ayaa ah Bastides. Kuwani waa guryo qurux badan oo qurux badan oo u adeegay sidii deggenaansho labaad ee magaalada bourgeoisie. Iyaga dhexdooda, Château de la Buzine wuxuu u taagan yahay quruxdiisa, laakiin maanta weli waxaa jira ku dhowaad laba boqol iyo konton ku baahsan baadiyaha Marseille.
Ugu dambeyntii, in jasiiradda If waa qalcaddii qarnigii XNUMXaad oo caan ku ahayd xabsiga uu ku jiray Tirinta Monte Cristo, dabeecadda caanka ah ee Alexander Dumas.
Lyon, saddexaad ee tobanka magaalo ee ugu muhiimsan Faransiiska
Iyada oo ku dhowaad nus milyan qof deggan, Lyon, caasimada hore ee Gaul, waa magaalada saddexaad ee ugu muhiimsan Faransiiska. Waxay caan ku tahay soo saarista xariirrada, laakiin waxaas oo dhan waxay uga sarreeyaan dhismaheeda weyn ee weyn. Xaqiiqdii, in badan oo ka mid ah ayaa ku qoran Dhaxalka aduunka.
Waxaan kugula talineynaa inaad soo booqato Vieux Lyon, oo loogu magac daray xaafadihii dhexe iyo dib u soo nooleyntiisii. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa john cathedral, iyadoo leh daaqaddeeda sare ee ubax weyn ee isku dhafan Romanesque iyo Gothic. Laakiin sidoo kale kaniisadda San Jorge, Pink Tower, dhismayaasha Stock Exchange iyo hudheelka Bullioud ama Plaza de la Trinidad u gaar ah.
Si kastaba ha noqotee, laga yaabee kuwa ugu caansan ee Lyon waa traboules, oo ah marinno gudaha ah oo u dhexeeya barxadaha guryaha. Magaaladu waxay leedahay qiyaastii shan boqol, gaar ahaan magaaladeedii hore. Ugu dambeyntii, buurta Fourvière waxaad ka heli doontaa tiyaatarka Roomaanka iyo odeon, iyo sidoo kale soo rogid Notre-Dame de Fourvière basilica.
Toulouse, caasimada Occitania
Hoolka Magaalada Toulouse
Ku caan baxay "Magaalada Pink" Sababtoo ah midabkani wuxuu ku badan yahay dhismayaasha bulukeeti ee taariikhiga ah, Toulouse sidoo kale wax badan ayaa kuu soo bandhigi kara.
Waxaa ka mid ah astaamaha diiniga ah, waxaan kugula talineynaa inaad booqato Katidralka Saint Étienne, oo leh qaabkeeda gothic koonfureed, iyo wacdaraha basilica ee San Sernín, oo ah mid ka mid ah kaniisadaha ugu waaweyn ee Romanesque ee ku yaal Yurub. Laakiin sidoo kale kaniisadaha reer Yacquub iyo basilica ee Dorada ee Toulouse, oo ay ku jiraan waxa loogu yeero Black Virgin.
Sida dhismayaasha madaniga ah, kuwa badan munaaradaha gothic sida kuwa Boysson, Bernuy, Serta ama Olmières. Iyo si isku mid ah kuwooda daboolida dib u soo noolaynta. Tusaale ahaan, kuwa Hoteelka Molinier, Assézat ama Jaamacadda.
Goor dambe waa dhismaha cajiibka ah ee Capitol, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad oo hadda xarun u ah Golaha Deegaanka; duug ah Isbitaalka de la Qabri, oo leh qubbad cajaa'ib leh iyo kanaalka du midi, shaqo aan caadi ahayn oo injineernimo ah oo ah Goob Dhaxal Adduun.
Wanaagsan, dhalaalka Côte d'Azur
Wanaagsan: qalcaddii Ingiriiska
Nice qurux badan ayaa ka mid ah tobanka magaalo ee ugu sareeya Faransiiska dhowr sababood awgood. Marka hore, tirada dadka deggan, tan iyo markii ay ku dhowaad gaadhayso saddex boqol iyo konton kun. Laakiin, ka sarreeya dhammaan, joogitaanka aagga dalxiiska ee Xeebta Buluug waxayna leeyihiin sideed kilomitir oo xeebo qurux badan. Dhexdooda, waxaan xusi doonnaa tii Opera, tii Le Sporting ama tii Castel.
Waxaan sidoo kale u soo jeedinaynaa taalooyin sida qalcadda Monte Alban iyo daaraha waaweyn ee Savoy, Gobolka ama Guurtida, adigoon ilaawin kuwa caanka ah socodka ingiriisiga. Waa in lagu daro talobixintayada, dhismayaasha la dhisay intii lagu jiray Belle Epoque. Tusaale ahaan, qalcadaha del Inglés, Valrose, Santa Helena iyo Gairaut ama Hotel Excelsior.
Nantes, magaaladii Jules Verne
Nantes: Qasriga Dukes ee Brittany
Hadda waxaan u soconaa galbeedka Faransiiska si aan u aragno magaaladii qoraaga Jules Verne. Magaaladaan Breton sidoo kale waxay leedahay taalooyin badan. Cajiibka ah qalcaddii dhexe ee Dukes ee Brittany iyo Kaniisadda Saint Peter iyo Saint Paul, iskudhisid qaabab dhismeedka kala duwan.
Iyo, agtooda, kuwa qaaliga ah basilica ee nicholas quduuska ah, Neo-Gothic oo ku qoran taallo taariikhi ah oo Faransiis ah; albaabka Gallo-Roman ee San Pedro; Dhismooyinka Dawladda Hoose iyo Dhismooyinka Suuqa Sarrifka ama tiyaatarka Graslin. Dhamaantood iyaga oo aan ilaawin, si hufan, ah Matxafka Jules VerneBooqasho lama huraan u ah taageerayaasha qoraaga gaar ahaan iyo inta jecel suugaanta guud ahaan.
Strasbourg, caasimada yurub
Strasbourg: Faransiiska yar
Waxaa loo tixgeliyaa caasimada Yurub oo ay weheliso Brussels iyo Luxembourg, magaaladan Alsatian ee xadka la leh Jarmalka waxay leedahay xarun taariikhi ah ayaa lagu dhawaaqay inay tahay Goob Hidaha Dunida.
Kani wuxuu ku fadhiyaa wicitaanka Jasiiradda Weyn ee Strasbourg, meesha ay tahay inaad soo booqato xiisaha Notre Dame Cathedral, Gothic qaab ahaan loo tixgeliyey dhismaha diinta afraad ee adduunka ugu dheer. Sidoo kale waa inaad aragtaa kaniisadaha Santo Tomás, San Pedro el Viejo iyo San Esteban.
Iyada oo ay la socdaan taallooyinkan, waxaad ka heli doontaa Strasbourg kuwa kale sida Xaafada yar ee France, oo leh jidadkeeda iyo dhismayaasheeda dhexe, Qasriga Rohan ama guryaha Kammerzell ama Kastamka. Ugu dambeyntii, ha ilaawin inaad dhex marto Fagaaraha Kleber, bartamaha aagga ganacsiga, iyo in la arko Matxafka Farshaxanka Fiican, oo ay ku urursan tahay sawirro muhiim ah.
Montpellier, oo ah magaalo ay lahayd Taajka Aragon
Montpellier: Katidral St. Peter
Waa magaalo da 'yar marka la barbardhigo magaalooyinkii hore intooda badan, tan iyo markii la aasaasay qarnigii XNUMXaad. Si kastaba ha noqotee, kama maqna meelaha xiisaha leh ee ku habboon booqashadaada.
Midka koowaad waa Kaniisada San Pedro, oo leh dekedda gaarka loo leeyahay oo ay qaabeeyeen laba tiir oo xor ah iyo dahaadhkeeda. Iyo, intaa dheer, waxaan kugula talineynaa inaad aragto biyo mareenka San Clemente, oo la dhisay qarnigii XNUMX-aad, iridda Peyrou, qaabka loo yaqaan 'Doric', iyo dhismaha quruxda badan ee Kulliyadda Caafimaadka halkaas oo ay wax ku barteen jilayaasha sida Nostradamus, Rabelais iyo Ramón Llul.
Qeyb ahaan, Jardin des Plantes Waa beerta dhirta ugu da'da weyn ee Faransiiska, tan iyo markii la abuuray 1523 iyo Tower of Pines waxay ka bilaabmaysaa qarnigii XNUMXaad waxayna ka jawaabtaa qaabka Norman Gothic.
Bordeaux, oo ah dalkii khamriga
Fagaaraha Suuqa Kala Iibsiga ee Bordeaux
Magaalada caasimada u ah gobolka cusub ee 'Aquitaine', Bordeaux ayaa la oran jiray "Quruxda Hurdada" waayo muddo dheer oo aan noolaan iyada oo aan kor loo qaadin taalooyinkeeda. Si kastaba ha noqotee, dhowr sano hadda, waxay toosisay dalxiiska. Xaqiiqdii, aagga magaalada ee loo yaqaan Dekedda Dayaxa Waxaa lagu dhawaaqay inay tahay Goob Hidaha Dunida.
En "Luulka Aquitaine", sida loo yaqaan, waa inaad soo booqataa Katidralka St. Andrew, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad, irdihiisii ​​dhexe sida kan Cailhau iyo kan cajiibka ah basilica ee Saint-Michel, Qaab dhismeedka xiisaha leh ee Gothic-ka iyo munaarad dawan fallaar leh oo kor u dhaafaya boqol mitir
Laakiin sidoo kale waa inaad aragtaa basilica ee San Severino, ku soo rogaya abbey Santa Cruz, Tiyaatarka weyn ee cajiibka ah iyo Xaafada Lescure, dhammaantood waxaa lagu dhisay qaabka farshaxanka. Waxaas oo dhan iyada oo aan la iloobin Fagaaraha suuqa saamiyada, urur dhismeedka cajiibka ah ee dhismooyinka casriga ah.
Lille, «Magaalada Fanka iyo Taariikhda»
Si aan u dhammaystirno socdaalkeenna tobanka magaalo ee ugu muhiimsan Faransiiska, waxaan ku istaagi doonnaa Lille, oo loogu magac daray "Magaalada Fanka iyo Taariikhda" maadaama ay ahayd Caasimadda Dhaqanka Yurub 2004.
Aad ugu dhow xadka Beljamka, Lille waa weyn daarta Vauban, oo hadda loo beddelay jardiino. Waa inaad sidoo kale aragtaa quruxdeeda Notre Dame de la Treille cathedral, qaabka neo-gothic-ka oo la dhisay qarnigii sagaal iyo tobnaad. Sida kuwa dhow kaniisadda St. Maurice, wuxuu hayaa qaybta Taallada Taariikhda ee Faransiiska.
Laakiin, qurux badan haddii ay suurtagal tahay waa Qasriga Farshaxanka Fiican, oo lagu dhisay amarka Napoleon oo ay ku yaalliin uruurin qurux badan oo sawirro iyo farshaxanno ah. Oo waxaannu kuu sheegi karnaa isla wixii ku saabsan dhismaha Opera. Laakiin astaanta weyn ee Lille waa Charles de Gaulle, oo leh matxaf lagu rakibo meeshuu ku dhashay.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay tobanka magaalo ee ugu muhiimsan faransiiska. Si kastaba ha noqotee, kuwo kale oo badan ayaa wali ku sii jira dhuunta. Tusaale ahaan dalxiis Cannes, taas oo aan horeyba ugu hibeynay farriin ku saabsan bartayada, qarniyadii dhexe Carcassonne, taariikhi ah Avignon ama dadka badan Aix en Provence. Miyaadan rabin inaad garatid iyaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Tobanka magaalo ee ugu muhiimsan Faransiiska